माघे सक्रान्तिमा खाइने खिचडीका यस्ता हुन्छन् फाइदाहरु ! – Medianp
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, पुष २५, २०७५१४:०९0
नेपालीहरुले परम्परादेखिनै माघे संक्रान्तिलाई मनाउँदै आएका छन् । माघे संक्रान्ति नजिकिदै छ, यस पर्वको विशेष महत्व रहेको छ । माघे संक्रान्तिको दिन मकर राशीमा सूर्य प्रवेश गर्दछ, यस दिनलाई माघे सक्रान्तिको साथमा मकर संक्रान्ति र माघी पर्वको भन्ने चलन पनि छ । यसै दिन देखि सूर्य दक्षिणायणबाट उत्तररायणमा प्रवेश गर्ने कारणले गर्दा रात छोटो र दिन लामो हुन्छ र बिरुवामा नयाँ पालुवा पनि पलाउन सुरु गर्दछ । यस पर्वमा चाकु, घिऊ, तरुल, तिलको लड्डु र खिचडी खाने चलन रहेको छ ।
उक्त दिन खिचडी खानाले स्वस्थमा धेरै फाइदा हुन्छ । यसलाई धेरैले जाउलो सम्झेर खादैनन् । किनकि खिचडी खानाले हाम्रो शरीरलाई कस्तो फाइदा गर्छ भन्ने बारेमा जानकारी छैन् । भएपनि यसलाई व्यवस्थित र स्वादिलो ढंगबाट नपकाउँदा पनि खिचित प्रति मानिसहरु आर्कषित नभएका हुन् । शाहाकारी मानिसको लागी खिचिडी भन्दा राम्रो अन्य खानेकुराको विकल्प छैन् । किनकि खिचडीमा धेरै पौष्ट्रिक तत्वहरु रहेका हुन्छन् ।
चामल र दाललाई मिसाएर पकाइने खिचडी एक पाचन गर्न सजिलो भोजन हो । खिचडीमा मसला हाल्ने चलन छैन् तर कोहिलाई मसला नभई हुदैन् । त्यसकारणले गर्दा खिचडिलाई स्वादिलो बनाउनको लागी स्वाद अनुसारको मसला पनि हाल्न सकिन्छ, तर धेरै भने हाल्नु हुदैमा मसलमा जिरा र शुद्ध धनियाँको धुलो मात्र हालेमा स्वादिलो हुन्छ ।
खिचडीमा दहि मिसाएर खाने बानी धेरैको छैन्, यदि दहि मिसाएर सेवन गरेमा अझै स्वादिलो बनाउन सकिन्छ । खिचडी खाँदा कस्ता फाइदा हुन्छन् त ?
१. भरपुर मात्रामा पोषक तत्व पाइने ।
पोषक तत्वको कमी भएकाको लागी खिचडी निकै फाइदाजनक खानेकुरा हो । खिचडीमा कार्बोहाइड्रेट, भिटामिन, क्याल्सियम, फाइबर, म्याग्निशियम, पोटाशियम र फस्फोरसको लगायतका अन्य तत्वहरु पाइन्छ । यसमा साग सब्जी मिसाएर सेवन पनि गर्न सकिने कारणले गर्दा तपाईले पोषक तत्वको मात्रालाई बढाउँन पनि सक्नुहुन्छ ।
२. पचानप्रणालीमा सुधार
खिचडीमा अखाद्य पदार्थको प्रयोग गरिदैन् जसको कारणले गर्दा पाचनतन्त्र कम छ भने पनि खिचडीले खानाले पाचनतन्त्रमा सुधार ल्याउँछ ।
३. रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने ।
खिचडिको नियमित सेवनले पित्त र कफको समस्यालाई टाढा राख्छ भन्नेबारेमा धेरैलाई जानकारी छैन्, यसको नियमित रुपमा सेवन गर्नाले यस्ता समस्याको साथमा पेटमा खराबी हुन नदिई रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ ।